"Gịnị bụ Kristen Sayensi?" nké-nké edemede - Kraist Sayensi
"Gịnị bụ Kristen Sayensi?" nké-nké edemede
Edemede ọhụ a nke dị nké-nké nakọwa etu Kristen Sayensi si amụ ihe banyere Chineke na itinye ya n’ọlụ, nakọwa kwa ihe omume nile nke The First Church of Christ, Scientist, na akwụkwọ ndị ọ nebipụta. Enwere ike butuo ya, kọpịrị kwa ya ma kesara ndị mmadụ.
N’oge dị ugbua, nké-nké edemede a dị n’asụsụ Igbo, Arabic, Bekee, Danish, Dutch, French, Germani, Grik, Iluko, Indonesia, Italian, Japanese, Korean, Lingala, okwu ndi China ebiri ichafu, okwu omenala ndi China, Panya, Polish, Potoki, na Russian.
Na mgbada ka enyere ntụzi aka etu agesi butuo ma kọpịrị nké-nké edemede a n’ụzọ abụa – nke A4, na nke mkpụrụ – nke neji oji na nke nacha ọcha n’ụzọ abụa ahụ.
Nké-nké edemede ndị enwere ike butuo ma kọpịrị
A4, nke nacha uhie-uhie (21 cm x 29.7 cm):
gịnị-bụ-Kristen-Sayensi_A4 (.pdf) 1.78 MB
A4, nke dị ojie na nke dị ọcha (21 cm x 29.7 cm):
gịnị-bụ-Kristen-Sayensi_A4 bw (.pdf) 2.15 MB
Mkpụrụ okwu, nke etere ágbà (8.5 in x 11 in):
gịnị-bụ-Kristen-Sayensi_na mkpụrụ okwu (.pdf) 1.86 MB
Mkpụrụ okwu, nke dị oji na nke dị ọcha (8.5 in x 11 in):
gịnị-bụ-Kristen-Sayensi_na mkpụrụ okwu bw (.pdf) 2.24 MB
Etu agesi butuo ma kọpịrị ya
Metu aka n’aha faịlụ ahụ ka o butuo PDF ya.
Mehe PDF ahụ. Ọbụrụ na ị pughị imehe ya, metu aka nebe edere ka ị we butuo Adobe Acrobat Reader iji mehe PDF ndị ahụ.
Tinye aha ebe iji anata ozi (iji ma atụ, chọọchị, Ụlọ ịgụ Akwụkwọ, aha mmadụ) site na imetu aka ugbo abụọ n’akpati ahụ ghere oghe nke dị n’okpuru ebe edere “Find More”. De aha ozi ị chọrọ ka ọ pụta na nké-nké edemede gị.
Were mpé-mpé akwụkwọ (A4 ma ọ bụ mkpụrụ okwu) bipụta ya, n’ụdị ruru 100% ma atụọ ya n’akụkụ abụa.
Pịachie ya ụzọ atọ, malite na mpé-mpé nke edere “Gịnị bụ Kristen Sayensi” ka o we kpuchie mpé-mpé nke ọzọ edere “Ije ozi nke ịgwọ ọrịa nime mmụọ.”
Ibipụta ya n’ụlọ gị ma ọ bụ nebe anebipụta akwụkwọ, ndị ọ nabụghị ọlụ-aka ha, nka geme ka enwe oghere nacha ocha gburugburu mpé-mpé akwụkwọ ahụ. Ma nka adịghị njọ.
Ozi maka ibipụta akwụkwọ:
Ụdị faịlụ: Adobe PDF
Etu ọ si acha: CMYK
Etu ọ ra: A4 ma ọ bụ Mkpụrụ okwu
Bipụta ya ụzọ abụọ
Pịachie ya ụzọ atọ